Izaho, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, mpitantana ny Emira Arabo ao Dubai
Ny fijerena ny:
Lalàna federaly No. 5 amin'ny 1985 momba ny fifampiraharaham-bahoaka sy ny fanitsiana azy;
Ary ny Lalàna No. 7 amin'ny 2006 momba ny fisoratana anarana ho an'ny ao Emiràin'i Dubai;
Ary ny Fitsipika No. 3 amin'ny 2006 momba ny fametrahana faritra voatondro izay tsy ahafahan'ny olom-pirenena manana fananana ao amin'ny Emiratin'i Dubai,
Io Lalàna io dia antsoina hoe Lalàna No.  an'ny 2007 momba ny maha-tompon'andraikitra amin'ny fananana iombonana ao Emirà ao Dubai.
Ireto teny sy teny manaraka ireto raha tsy hoe ny fehezan-teny ilazana azy dia tsy maintsy misy ireto dikany ireto:
sampan-draharaha: Departemantan'ny tany
Mpitari-draharaha: Filohan'ny Departemanta
lisitra: Ny rejisim-pitanana dia mitazona ao amin'ny Departemanta
Master Developer: Ny olona izay nahazo alalana hiditra amin'ny fampandrosoana trano sy fivarotana ny Unites ao amin'ny Emirate araka ny fepetran'ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny fiarahamonina.
Zana-Developer: ny olona izay nahazo alalana hiditra amin'ny fampivoarana ny trano sy ny fivarotana ny Units ary nanome zo avy amin'ny Mpampiasa Master Developer mba hampivelatra ampahany amin'ny tetik'asa fampandrosoana mifanaraka amin'ny fepetran'ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny fiarahamonina mifandraika amin'izany tetikasa izany.
Ny fananana iombonana: Ny ampahany na ny ampahany amin'ny tranobe na ny tany, na ny roa, dia mizara ho an'ny Vondronasa natokana ho an'ny fananana samihafa izay misy ny ampahany trano na tany toy ny Common Areas.
Unit: Ny trano, trano, ampahany amin'ny trano na trano (trano) mifandray na tsy mifandray amin'ny trano hafa izay ampahany amin'ny Tahirin-tena iombonana.
Common Areas: Ireo ampahany iombonana amin'ny fananana voatondro ho an'ny fampiasana iombonana amin'ny tompona tokana sy ny mpikamabana ary hita ao amin'ny Site Plan.
Site Plan: Drafitra voasoratra ao amin'ny rejisitra mampiseho ireo vondrona sy ireo sehatra iraisana.
The Owner: Ny olona izay voasoratra anarana ho tompon'ny Unit ao amin'ny rejisitra, anisan'izany ny olona manana tetibola maharitra na mampihatra lalàna ho an'ny fotoana voafetra ary koa ny Mpampiasa Master na ny Mpandrindra Fanampiana momba ny Units tsy misy.
Famaritana momba ny fiarahamonin'ny Mpiara-miombon'antoka: Ny fepetra sy fepetra mifehy ny fampandrosoana sy ny fitrandrahana ny fananana iombonana.
Fanatanterahana ny teti-bola momba ny fitantanana: Dokam-barotra mifandraika amin'ny fitsipika mifandraika amin'izany ary voasoratra ao amin'ny rejisitra izay mamaritra ny fandaharam-potoana ho an'ny fisokafan'ny toeram-piasana sy ny famoahana ny vidiny mifandraika amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny fitaovana, ary ny fitaovana sy ny serivisy amin'ny lafiny hafa amin'ny trano hafa.
Fikambanana Fikambanana: Fikambanana iray mifanaraka amin'ny andalana 17 amin'ity Lalàna ity.
Fivoriambe iraisam-pirenena: Ny fitsipika sy fitsipika mifehy ny Fikambanan'ny tompona, izay homena araka ny Lalàna.
Occupier: Na iza na iza manofa birao iray (ankoatra ny fanofana lava) sy ny mpitsidika tompon'ny tompona.
Asa fanompoana: Ny iray amin'ireto tolotra manaraka ireto:
1. famerenana rano na fanomezana;
2. fanodinana orina;
3. famatsiana herinaratra;
6. data na solosaina amin'ny serasera;
7. rafitra ririnina;
9. rafitra fanesorana na fandefasana fako na fako;
10. rafitra iray ho an'ny fampitaovana mailaka, parcels na entana;
11. na rafitra hafa na serivisy natao hanatsarana ny Toeram-pitaovan'ny Oniversite na Common Areas.
1- Ny tanin'ny mpandraharaha ary ampiasaina amin'ny propriété propriétés (ary ny sampana namidy ireo mpamorona) dia voasoratra ao amin'ny Departemanta.
2- Raha misy olona iray ao amin'ny fananana manana fananana iombonana dia ampiasain'ireo tompona trano fananana hafa, ny Fikambanan'ny tompon-trano ho an'ny fananana fananana faharoa dia lasa mpikambana ao amin'ny Fikambanana tomponandraikitra ho an'ny fananana iombonana voalohany.
Ny Departemanta dia hanomana sy hitazona rejisitra manokana ho an'ny fananana iombonana sy ny tompony ary hamoaka asa an-tsoratra araka ny tokony ho izy ary hifehezana ny saram-pandraharahana, ny antoka (na ny fandefasana entana hafa) ireo fananana manana ny anjara nomena azy ary ny fisoratana anarana amin'ny fifanarahana fifanarahana maharitra sy ny zon'ny mpamorona mifandraika amin'ireo fananana iombonana. Ny fidirana amin'ireo rejisitra ireo dia omena ny antoko rehetra voakasik'izany.
Article (4) amin'ny Lalàna No (7) an'ny 2006 momba ny fisoratana anarana ara-panjakana ao amin'ny Emiratin'i Dubai dia mihatra amin'ny tompon'ny fananana iombonana.
Ny fananana ny fananana iombonana
1- Ny drafitry ny tranonkala sy ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny fiarahamonina ary ny Lalàm-panorenana dia mamolavola ny ampahany amin'ny fananana ny Tahirim-bolan'ny Tahirimbolam-panjakana, ary tokony ampifandraisina amin'izy ireo, ary ny Departemanta dia mitazona kopia tany am-boalohany momba ny fanambarana ankapobeny.
2- Ny tompon'ny fananana tsirairay dia manana adidy manohana ireo tompona hafa, tompon'andraikitra ary ny Fikambanana tompon'andraikitra mba hanaraka ny fanambarana iombonana momba ny fiarahamonina sy ny lalàm-panorenana.
3- Ny mpitrandraka tsirairay dia manana adidy ho an'ny tompona hafa, tompon'andraikitra ary ny Fikambanan'ny tompony hanaraka ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny fiarahamonina sy ny Lalàm-panorenana, raha toa ka mihatra amin'ny Occupier ny fepetra takiany.
1- Raha tsy misy fanamarihana hafa ao amin'ny drafitry ny tranonkala, dia misy ny Common areas of Joint Owned Property, anisan'izany ny:
(a) Ireo singa fototra mifototra amin'ny fananana iombonana, anisan'izany ny fototry ny fanorenana, ny fototra, ny tsanganana, ny rindrina, ny rindrina, ny dingana, ny tafo, ny lavarangana, ny lalantsara, ny tohatra, ny tohatra, ny fidirana an-jatony, ny fidirana, ny varavarankely eo amin'ny rindrina ivelany, ny rindrina ary ny tafo ;
b) Toeram-piantsonana, efitrano fitandremana, fitaovana fialamboly sy fitaovana, dobo filomanosana, zaridaina, toeram-pivarotana, toerana voatondro ho ampiasain'ny Fikambanan'ny tompona zana-bola na izay manome izany na fifanarahana amin'ny fitantanana ny fananana iombonana;
c) fitaovana sy fitaovana fototra fitaovana enti-manana, toy ny angovo elektrisitera, rafitra fanamafisana, fitaovam-pitrandrahana gazy sy fitaovana, rafitra rano, rafitra fanamafisana sy fandriam-pahalemana;
d) Fanamboarana, fiara mifono vy, fantsom-batana, mpamokatra herinaratra, fanatanjaham-panala, vata fampangatsiahana rivotra, rafitra fanamorana mechanical;
e) Fikojakojana rano, fantsom-pahamendrehana, fantsom-panamboaram-bidy, fantsona gaza ary gripa ary famindran-jiro sy fitaovana elektrônika manompo mihoatra ny iray;
f) Ny fitaovana rehetra, fifandraisana, fitaovana ary fitaovana ampiasain'ny tompona Unit iray mihoatra ny iray;
g) Ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny famerenana ny fametahana na famatsiana fitaovana;
h) Ny ampahany hafa rehetra tsy ao anatin'ny faritry ny Unit, izay ilaina sy takiana amin'ny fisiana, fikojakojana na fiarovana ny fananana
(2) Raha tsy misy fanamarihana hafa ao amin'ny drafitry ny tranonkala, ny vohikala iombonana amin'ny ankapobeny dia ahitana tany, ankoatra ny tranobe na ampahany amin'ny trano iray, ahitana, tsy misy fetra:
a) lalana, fiaramanidina, fiaramanidina, làlana, sisin-damban-trano, drafitra fitrandrahana, fantsom-panafody, tetezana mediana, tetezana, viadukts,
b) farihy, dobo, lakandrano, lohasaha, loharano, rano sy riandrano hafa, anisan'izany fitaovana rehetra misy azy;
c) Toeram-ponenana, sehatra malalaka ary kianja filalaovana.
d) drafitra, telegrama, fantsom-batana, fantsom-pitondrana, fandotoana, lakandrano, fitaovana ary fitaovana izay ampiasain'ny Unites na Common Areas amin'ny Utility Services; ary
e) fitaovana fametrahana fitaovana na fitaovana ampiasaina ho an'ny serivisy voatondro ho an'ny fampiasana iombonana amin'ny tompona sy ny mpiara-miasa.
(1) Raha tsy misy fanamarihana hafa ao amin'ny Plan du Site, ny singa tsirairay ao amin'ny tranobe na ampahany amin'ny trano dia tokony hahitana, tsy misy fetra, ireto manaraka ireto:
a) Toeram-pivarotana, rindrankajy ary fitaovana midina mankany amin'ny toeram-ponenana sy ireo rafitra hafa manohana ny gorodon'ny Unit
b) Ny tafatambatra plastika sy ny karazana tafo hafa rehetra, ny fanampiana izay ampahany amin'ny faritra anatiny ao amin'ny Vondrona ary ireo efamira eo anelanelan'ny valindrihana, ireo tafo ambonin'ireo rindrina ary ireo rafitra ao anatin'ilay Vondrona sy ireo rindrina manasaraka ny Vondrona avy amin'ny ambiny Ny fananana sy ny sampana mifanaraka na faritra iraisana
c) Ny rindrina tsy misy entana sy ny rindrina tsy misy fanohanana ao anatin'ilay Vondrona;
d) Fenitra, varavarankely, varavarankely, varavarankely ary fitaovana sy fitaovana rehetra manompo ao amin'ny Vondrona;
e) Ny fifandraisana anatiny rehetra manompo ny Unit;
f) Ny fitaovana sy fitaovana rehetra napetraky ny tompon'ny trano na ny mpikam- bana;
g) Ny fanampiana rehetra, ny fanovana sy ny fanatsarana natao ho an'ny Unit,
ary amin'ny tanjon'ity paragrafy ity ny Unit saingy tsy ahitana ny Sampandraharaha Utilisie ao amin'ny Unit izay manolotra ny Common Areas na Unit hafa.
(2) Raha tsy misy fanamarihana hafa ao amin'ny Plan du Site, ny singa tsirairay mifandraika amin'ny Tahirin'ny Tahirin-tena iombonana, izay ahitana faritra iray, ankoatra ny trano na ampahany iray amin'ny trano iray, dia tsy maintsy misy, tsy voafetra, ny zavatra rehetra ao anatin'ny faritry ny Vondrona, afa-tsy ny Sampan-draharaham-pahasalamana izay manolotra ny faritra mahazatra na vondrona hafa.
(3) Ny vondrona tsirairay dia manan-jo hahazo fanohanana sy fialofana mifanaraka amin'ny sampana hafa sy ny faritra iraisana.
(4) Mizara ny rindrina eo anelanelan'ireo vondrona misy ny roa tonta dia samy hizara ny tompony raha toa ka anisan'ny faritra iraisana izy ireo.
Ny tompona orinasa sy ny mpikamabana mifandraika amin'ny tsy manankery dia manana anjara mavitrika amin'ny sehatra iraisana amin'ny ampahany voalaza ao amin'ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny fiarahamonina, raha tsy misy ny fifanarahana hafa.
Ho an'ny tanjon'ity fehintsoratra ity dia ny ampahany azo apetraka amin'ny toeran'ny faritra dia avy amin'ny faritra manontolo amin'ny fananana iombonana.
Fanesorana ireo singa miantoka ny fananana iombonana
Ny tompona trano iray dia afaka mivarotra na manapaka ny Vondrona misy azy noho ny karazana entana rehetra ary koa manan-jo handoitra ny Vondrona ho tombontsoan'ny banky na orinasa ara-bola raha toa ka manome ny tombotsoany amin'ny tontolon'ny faritra sy ny vondron'olona izy.
Ny vondrona iray misy olona roa na maromaro dia tsy azo zaraina amin'ny mpiara-miasa raha tsy mahazo ny fankatoavana ny Departemanta.
(a) Ny tompon 'ny tarika tsirairay dia manana zo tsy mety mividy mpiara-mipetraka hafa ao amin' ny Unit iray natolotra mba hivarotana any amin 'ny tsy namana. Raha mihoatra ny iray amin'ny mpiara-miasa iray no manana izany zo izany, dia izy ireo dia manan-jo hividy araka ny tombontsoany efa misy.
b) Ny zon'ny fandavana voalohany dia tsy miankina amin'ny fivarotana eo amin'ny mpivady, ny mpitaiza, ny tarika, ny rahalahy na ny anabavy, na ny taranany.
(1) Tsy azo zaraina ny zon'ny fandavana voalohany, noho izany dia tsy azo ampiasaina na havaozina raha tsy amin'ny ankapobeny, ary raha misy tompony manana zo dia tokony hampiasa ny zony araka ny anjarany, ary raha nisy na iray na sasany nafoiny Ny zony dia izany zo izany dia ampitaina araka ny tombotsoany
(2) Ny zon'ilay fandavana voalohany dia tsy tokony hijanona raha ny tompon'ny fivarota-mitantana no mampahafantatra ny mpiara-miasa hafa, amin'ny Notary Public, ny anarana sy ny adiresin'ny mpividy fahatelo ary ny fe-potoana fivarotana, ary tsy mahomby ny mpiara-miasa manaiky ny fepetra voalaza ao anatin'ny fe-potoana iray volana 1 taorian'ny nahazoany fanambarana.
(3) Raha toa ka manaiky ny hividy ilay tompona mpiara-miombon'antoka dia tsy maintsy mampahafantatra ny mpivarotra miaraka amin'ny Notary Public ny voalaza ao amin'ny 15 andro nanaovana ny fivarotana ary hamita ny fomba fivarotana ao amin'ny Departemanta ao anatin'ny 10 andro fiasana nahavita ity vanim-potoana ity.
(4) Raha ankatoavina ny fivarotana dia atao amin'ny teny tsara kokoa ho an'ny mpividy avy amin'ireo teny voalaza ireo amin'ny fampandrenesana nalefa ho an'ny tompon'ny zo amin'ny fandoavana voalohany; Manana zo izy ireo hitaky ny fanonerana ny fahasimbana naterak'izy ireo teo anoloan'ny fitsarana.
Ireo fananana manana ny fananana voatokana araka ny Lalàna dia tsy mifanaraka amin'ny voalazan'ny fepetra voalaza ao amin'ny Lalàna federaly sivily (5) an'ny 1985 araka ny fanitsiana.
Ny tompon'ny kaominina dia afaka mandoa ny Vondrona misy azy amin'ny fehezan-dalàna fa ny tompon'ny trano sy ny mpitrandraka dia tsy maintsy manatanteraka ny Lalàm-panorenana Association sy ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny fiarahamonina amin'ny tompona hafa, ny mpikamabana ary ny fikambanan'ny tompona.
Raha tsy misy ny toe-javatra dia azo zaraina ny faritra iraisana. Ireo sehatra iraisana dia tsy azo alamina, amin'ny ankapobeny na amin'ny ampahany, amin'ny fisaratsoratra samihafa.
1- Ny Fikambanam-bokin'ny fikambanana dia nofaritana ara-dalàna amin'ny fisoratana anarana ny fivarotana voalohany ny Vondrona iray ao amin'ny fananana iombonana ao amin'ny rejisitra.
2- Ny Fikambanana dia ahitana ny tompom-baventy avy amin'ny fananana iombonana miaraka amin'ny tompony na ny mpandrafitra eo ambany ho an'ny vondrona tsy misy.
3- Ny mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Mpikambana ao amin'ny Fikambanana dia hanomboka amin'ny fisoratana anarana ho tompon'ny Birao ary hanohy ny fahavitan'ny fisoratana anarana ho tompon'ny Unit
1- Ny fikambanan'ny tompona trano dia tsy miankina amin'ny tombony, ary manana antokon-dalàna miavaka avy amin'ny mpikambana ao aminy, dia manana zo hitory amin'izany fahafahana izany ary hanana fananana be havaozina.
2- Ny Fikambananan'ny tompona dia mifanaraka amin'ny fepetra sy ny fepetra voalazan'ity Lalàna ity, ny fepetra voalazan'ny fanambarana momba ny fiombonam-baovaon'ny Mpikambana sy ny Lalàm-panorenana Association ary ny solontenan'ny Mpitantana azy.
Ny 1-Ny tompon'ny tontonana tsirairay sy ny mpandrafitra mikasika ny singa tsy misy dikany dia manan-jo hanatrika sy hifidy any amin'ny fivorian'ny Fihaonambe ny Fikambanan'ny tompona mifanaraka amin'ny Lalàmpanorenan'ny Fikambanana.
2- Ny tompon'ny fananana tsirairay dia manana vato maromaro arakaraka ny anjarany amin'ny fananana ao amin'ny Tahirim-Bahiny nomena azy araka izay voalaza ao amin'ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny fiarahamonina.
Ny fikambanan'ny tomponandraikitra rehetra dia tokony hanonona ny anaran'ny Association Owners, sy ny isa sy ny anaran'ny Tahiry iombonana, raha misy.
1-Ny Fikambanana tompon'andraikitra dia tompon'andraikitra amin'ny fitantanana, ny fampandehanana ary ny fikojakojana ny sehatra iraisana ary ny antony dia tsy maintsy mahazo fahazoan-dàlana mifanaraka amin'ny Departemanta.
2- Ny Fikambanan'ny tompona dia afaka manome ny rehetra na ny sasany amin'ny heriny ho an'ny olona iray na orinasa izay manonitra izany karama izany sy amin'ny fehezan-dalàna tahaka ny ifaneken'ny antoko.
1- Ny tompon'ny trano tsirairay dia handoa ny Fikambanan'ny tompony ny anjarany amin'ny saram-pandraharahana isan-taona mba hikarakarana ny fandaniana amin'ny fitantanana, ny fikojakojana, ny fikojakojana sy ny fanamboarana ny Common Areas. Ny sandam-bola toy izany dia tsy maintsy arotsak'aina araka ny ifandraisany amin'ny sehatry ny Unit ao amin'ny habak'orinasa miara-miasa. Ny Mpanjifa na Sub Developer dia handoa ny anjarany amin'ny saram-panajana amin'ny Units tsy misy.
2- Ny tompon'ny Vondrona dia mety tsy mandao ny anjarany amin'ny Common Areas mba hisorohana ny fandoavam-bola ny saram-pandraharahana isan-taona.
1- Raha tsy nahazo alalana avy amin'ny Fikambanan'ny tompona tompony na nahazo alalana tamin'ny Fanambarana nataon'ny Mpikambana ao amin'ny Community, ny tompona Unit dia mety tsy manao fanovana na fanovàna amin'ny rafitra na ny endriny ivelan'ny Unit na ny ampahany amin'ny Tahiry iombonana ny Vondrona na ny fananana iombonana na ny endriny ivelany.
2- Ny tompona tompon'andraikitra izay manohitra ny fepetra voalazan'ny paragrafy (1) dia mety hitranga amin'ny fanamboarana ny voka-dratsy ateraky ny fandaniam-bola sy ny fangatahan'ny Fikambanan'ny tomponandraikitra. Raha toa ka tsy mahafeno izany fepetra izany ny tompon'ny Sampana, ny Fikambanana tompon'ny tompony dia hanamboatra ny fahasimbana ary hamerina ny vola lany amin'ny fananana.
Raha tsy izany, ny Lalàm-panorenana, ny tompom-bahiny sy ny mpikamabana ary ny vahiny dia tokony hampiasa ny faritra iraisana araka ny fanendrena azy, ary amin'ny fomba izay tsy mampandefitra ny zon'ny hafa hampiasa ireo faritra ireo na hanelingelina ny hafa na hametraka ny fiarovana na ny fiarovana Fandraisan'anjaran'ny tanora.
1- Ny Fikambanan'ny tomponandraikitra dia hanana fatiantoka isaky ny sokajy ho an'ny saram-panaovana tsy manara-penitra sy ny andraikitra hafa rehetra ateraky ny tompon'ny Vondrona araka ny voalazan'ity Lalàna ity na ny Lalàm-panorenana Association. Io zo io dia hisy, na dia efa nafindra tany amin'ny tompon'ny tompony indray ny tompom-pananana.
2- Raha tsy mandoa ny saram-panompoana momba ny saram-pandraharahana na ny tsy fanajana ny andraikiny ny tompon'ny Vondrona, ny fanapahan-kevitr'ilay Mpitantana ny Fikambanana dia manohitra ny tompom-bondrona, aorian'ny volana 3 dia ampahafantarina azy amin'ny alàlan'ny Notary Public , azo tsoahina amin'ny Mpitsara mpanatanteraka ao amin'ny Fitsarana iraisam-pirenena, ary amin'ny toe-javatra rehetra, ny olona iharan'ny herisetra dia afaka manapa-kevitra amin'io fanapahan-kevitra io ao amin'io Fitsarana io, ary tsy maintsy atao ny famonoana mandra-pandraisany fanapahan-kevitra momba ny fanoherana.
Obligations of the Developer Property
1- Raha mikasika ny fepetra momba ny asa fanorenana ao amin'ny Lalàna Federaly Federaly No. (5) an'ny 1985, ny Developer dia manana andraikitra mandritra ny taona 10 amin'ny daty fanamarinana ny fananganana fanorenana sy fanasitranana ireo hadisoana ao amin'ny singa fototra Ny fananana iombonana dia nampahafantarin'ny Fikambanan'ny tompona na tompona trano iray.
2- Ny mpandrafitra, ho an'ny fampandrosoana na ampahany amin'ny fampandrosoana notontosain'ny tenany, dia mbola manan-kery mandritra ny taona 1 amin'ny daty fanamarinana ny fanorenana fanorenana hanamboatra na hanolo ny fametrahana ny tsy ampy eo amin'ny fananana fananana iombonana, ho an'ny ity lahatsoratra ity, dia ahitana asa mekanika sy herinaratra, fitrandrahana sanitaitra sy plumbing ary ny toy izany.
3- Raha jerena ny fepetra voalazan'ny fehintsoratra (1) sy (2) etsy ambony, tsy misy na inona na inona aty amin'ity Lalàna ity dia mety hisy fiantraikany na fanitsakitsahana zo na fiantohana rehetra mety ho azon'ny tompona tompon'andraikitra amin'ny fanamafisana ny mpikirakira na ny mpamorona eo ambanin'ny Lalàna hafa.
4- Ny fepetra mifanaraka amin'ny fepetra mifanaraka amin'ity andininy ity izay miditra ao anatin'ity Lalàna ity dia tsy maintsy atao tanteraka.
1-Mandra-pahatongan'ny famolavolana ny fananana iombonana amin'ny ambaratonga voalohany dia tsy maintsy manambara ny fandaminana ny fizarana an'ity tetikasa ity ny fanambarana ny Community Community.
2-Raha tsy voafetra ny ampahany amin'ny trano iray ary tsy misy ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny fiarahamonina dia voasoratra momba ny trano manontolo, dia tsy maintsy voasoratra ao amin'ny rejistra ny rejisitry ny fitantanana ny tranokala ho an'ny trano.
Miaramila miantoka ny fananana
Ny Fikambananan'ny Fikambanana dia tokony hitazona fiantohana feno amin'ny vola mitovy amin'ny fanonerana na ny fanoloana ny fananana ny Tahirin'ny Tahirin-tena ho an'ny fanimbana na inona na inona antony ary ny Fikambanana dia ny mpandray tombony amin'ny fiantohana.
Ny Fikambanana tompon'andraikitra dia miantoka fiantohana amin'ny fiantohana amin'ny fanimbana ny fananana na ny fanimbana olona amin'ny tompony sy ny mpikamabana.
Ny karaman'ny fiantohana azo aloa amin'ny tompona Unit tsirairay dia tokony ho voarakotry ny saram-panompoana isan-taona aloa amin'ny Fikambanana Owners according araka ny voalazan'ny lahatsoratra (22) amin'ity Lalàna ity.
Araka ny andininy (18) amin'ity Lalàna ity, ny Fikambanana tomponandraikitra dia mety, amin'ny anarany sy amin'ny anaran'ny mpikambana ao aminy, dia mandresy lahatra ny hafa, anisan'izany ny tompona hafa, ny mpikamabana ary ny olona hafa mandray ny fananana iombonana ho fanitsakitsahana izany. Lalàna na ny lalàm-panorenana.
Ny filoha dia mamoaka fitsipika sy fanapahan-kevitra ilaina hampiharana io Lalàna io.
Io Lalàna io dia havoaka amin'ny Gazetim-panjakana ary hanan-kery telo volana amin'ny daty famoahana azy.
Navoaka tao Dubai tamin'ny: 10 Desambra 2007
Mifandraika amin'ny: 30 Thu Al Qeada 1428 AH